समाचार - अझ महँगो राम्रो?
ईन्धन मिटरि Unit एकाई
अझ महँगो राम्रो?
केहि मानिसहरु लाई ड्राइभ गर्न जान्दछन्, तर सवारी राम्रो तरिकाले थाहा छैन। जब कार ग्यारेजमा पठाइएको थियो, तिनीहरूले प्राय: जसो उनीहरूलाई भनेको थियो त्यसो गरे, र तिनीहरूले कति पैसा खर्च गरे भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसोभए जब तपाईंको कारलाई नयाँ स्पार्क प्लगहरू चाहिन्छ, के तपाईंलाई कस्तो प्रकारको स्पार्क प्लगहरू साँच्चै चाहिन्छ भनेर थाँहा छ?
स्पार्क प्लग भनेको के हो?
स्पार्क प्लगहरू ईन्जिन इग्निशन प्रणालीको अटो पार्टहरू हुन्। इलेक्ट्रोड्स बीचको डिस्चार्जबाट स्पार्क उत्पन्न हुन्छ, जुन सिलिन्डरमा ग्यासहरूको मिश्रण प्रज्वलित गर्नको लागि जिम्मेवार हुन्छ, जुन कार सुरु गर्नका लागि जिम्मेवार हुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईंलाई आफ्नो कार चिसो स्थितिमा सुरु गर्न गाह्रो लाग्छ भने, यदि तपाईंले महत्त्वपूर्ण ब्रेकिंग, इडलिंग, वा ईन्जिन प्रवेगमा कमी देख्नुभयो भने, तपाईंलाई स्पार्क प्लग समस्या छ।
मालिकहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा स्पार्क प्लगहरू जाँच गर्न आवश्यक छ। स्पार्क प्लगहरूको सामान्य आयु 60०,००० किलोमिटर वा १०,००,००० किलोमिटर हो, र मालिकहरूले हरेक १०,००० वा २०,००० किलोमिटरमा जाँच गर्न सक्दछन्।
स्पार्क प्लगहरू कसरी जाँच गर्ने?
स्पार्क प्लग ईन्जिन सिलिन्डरको माथि छ। तपाईंले यसलाई हटाए पछि, तपाईंले सावधानीपूर्वक यसको अवस्था जाँच गर्नु पर्छ। सामान्यतया हामी कार्बन धब्बा, कछुवा चाप, असामान्य स्कार र इलेक्ट्रोडको लागि जाँच गर्दछौं। थप रूपमा, मालिकले ड्राइभि state्ग राज्यको अनुसार स्पार्क प्लगहरूको स्थिति पनि जाँच गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, गाडी एक पटक सुरु हुन असफल भयो वा ड्राइभ unknownको क्रममा अज्ञात शेक र पज भावना छ।
यदि स्पार्क प्लगहरू मात्र कालो बन्छ र कार्बन समावेश गर्दछ भने, यो समाधान गर्न सजिलो छ। मालिकहरू आफैंले सफा गर्न सक्दछन्। यदि कार्बन धेरै छैन भने, तपाईं स्पार्क प्लगहरू सिरकामा १-२ घण्टा भिजाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई नयाँ रूपमा सफा गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ धेरै कार्बन छ भने, तपाईं पनि विशेष क्लीनर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले राम्रो सफाई प्रभाव प्रदान गर्दछ। तर यदि तपाईं स्पार्क प्लगहरू क्र्याक वा डर भएको पाउनुभयो भने, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन उत्तम विकल्प हो।
अधिक महँगो राम्रो छ?
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका स्पार्क प्लगहरू छन्, जस्तै निकल र तामाको स्पार्क प्लगहरू जसको आयु २००० किलोमिटर लामो हुन्छ, इरिडियम प्लग्स 40०,००० देखि ,000०,००० किलोमिटरको आयु सहित र plat०,००० देखि ,000०,००० किलोमिटर लामो प्लैटिनम प्लगहरू। निस्सन्देह, यसको लामो आयु छ, यो महँगो हुन्छ।
केही मानिसहरूले इरिडियम स्पार्क प्लगहरूको सेटमा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दछन् जब तिनीहरूले इरिडियम स्पार्क प्लगहरू बारेमा सुने पछि उनीहरूको कारको शक्ति प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्दछन्। प्रतिस्थापन गरेर र प्रयोग गरिसकेपछि, तिनीहरूले पत्ता लगाउँदछ कि त्वरणमा कुनै सुधार गरिएको छैन। वास्तवमा कारको शक्ति प्रदर्शनको सुधारको लागि यो त्यति महँगो छैन। राम्रो स्पार्क प्लगहरूले कारको पावर प्रदर्शनको लागि मद्दत पुर्‍याउँछ, तर यो मद्दत पनि ईन्जिनमा निर्भर गर्दछ। यदि ईन्जिन प्रदर्शन एक निश्चित स्तरमा पुग्दैन, अधिक उन्नत स्पार्क प्लगहरूले पावर प्रदर्शनको लागि धेरै मद्दत गर्दैन।
स्पार्क प्लगहरूको बारेमा परिचय
पिस्टनहरूको बारेमा परिचय
हान्टियन औद्योगिक जिल्ला, Tangxia टाउन, रुई शहर, Zhejiang प्रान्त, चीन
हप्ताको Day दिन १०:०० देखि साँझ :00:०० सम्म
Um dol or sit,,,,,, el el el,,,,,,,,, temp temp